AVCHD Player Free: aad si fudud oo si fudud u ciyaari karaa AVCHD
> Resource > Free > Top 5 Free AVC HD Player
Haddii aad raadinayso ciyaaryahan AVCHD lacag la'aan ah waxaa jira qaar ka mid ah khayraadka weyn online ah inay sidaa sameeyaan. Qaar ka mid ah noocyada fiican yihiin kuwa kale oo ahaa saddexda ugu sareeya waxaa la Wondershare, SM Player iyo VLC Media Player. Mid kasta oo ka mid ah ciyaartoyda waa fududahay in la isticmaalo iyo taageero la daawado ee HD videos.
Maya 1 ciyaaryahan AVCHD Bilaashka ah ee Windows 8: Wondershare Video Player
Wondershare Bixisaa AVCHD FREE Player labada Windows iyo Mac. Ciyaaryahanka taageertaa faylasha sida AVI, wmv, MKV iyo MPEG in HD. Waxa kale oo ay taageertaa SD videos oo waa la jaan ugu qaabab audio.
Codecs Advanced waxaa loo isticmaalaa in ay Wondershare AVCHD Player. Tani waxay u ogolaaneysaa ciyaarta hufan faanaa faahfaahin tegayo iyo midabkiinaba cad ah. Tani waa ciyaaryahan kale oo aad u weyn in ciyaartoyda in lacag maxaa yeelay waxa ay ka timaaddaa oo leh waxyaabo badan oo la yaab leh ay jirto xaqiiqda ah in ay tahay lacag la'aan ah.
Wondershare Player Ayaa saamaxaya kuwa isticmaala inay joojiyaan video cadadka mid ka mid ah wakhtiga iyo weli awoodi karaan inuu ku soo laabto barta in video way ka tageen garoonka, badbaadinta markii user qiimo iyo samaynta waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan ciyaaryahanka si uu u daawado videos. Xitaa waxaa jira hab gaarka ah in kudhex taariikhda videos ay daawaday la Wondershare Player ah.
Marka ay timaado in ku daray files warbaahinta in ciyaaryahanka, dadka isticmaala waxay samayn kartaa adigoo bookmarking file halka ay Daawasho. Videos ku daray in ay Wondershare Player si toos ah lagu dari karaa si isticmaala playlist. Videos Bookmarked sidoo kale laga heli karaa Qalabka telefoonada gacanta iyo sidoo kale.
Download Free AVCHD Player (Windows 8 taageeray):
No.2 ciyaaryahan AVCHD Bilaashka ah ee Windows: SMPlayer
The SM Player waa AVCHD free kale Player u saamaxaya in ay si fudud u arkaan dhammaan video files ay. Its dhisay codecs u ogalaan in uu ciyaaro kaliya file kasta video user a laga yaabo in ay ururinta. Waxay xitaa taageeri karaan ciyaaro YouTube videos. Waxaa jira qaababka badan oo la helli karo iyadoo SM ku Player, sida shaandhada u audio iyo video iyo sidoo kale awooda uu u badalo xawaaraha loo maqli karo wax kasta oo video ah. Waxa kale oo uu leeyahay barbaraha video ah oo dadka isticmaala ku siinaysaa awood u leh inay beddesho heerarka audio iyo dhigay subtitles ay videos.SM Player waddaa labada mashiinada Linux iyo Windows.
3. ciyaaryahan AVCHD Bilaashka ah ee Mac, VLC Media Player
The VLC Media Player yahay, si fudud loo isticmaali ciyaaryahan video free. Its qaabka taageertaa ugu noocyada file, oo ay ku jirto faylasha multimedia. Si ka duwan noocyada kale ee lacag la'aan ah ciyaartoyda video, taas mid ka ciyaari kara geeyo videos sidoo kale DVDs iyo CD cod ah. Waxaa suurto gal ah in ay isticmaalaan webcam ah in ay fiidiyoow toos ah la isticmaalayo Media VLC ka Player. Waxa aanu u baahan codecs si ay u ciyaari videos, taas oo faa'iido kale oo ciyaartoy badan oo warbaahinta xorta ah ma bixiyaan. Waxa kale oo suuragal ah si loogu badalo files warbaahinta ka mid nooc kale in la isticmaalayo VLC.
Mid kasta oo ka mid ah saddexda doorasho ee free video ciyaartoyda waa mid aad loo jecel yahay dadka isticmaala adduunka oo dhan. Dhammaan iyaga ka mid ah waa ammaan in la soo dejisan in computer ah iyo in la siiyo hab fudud si uu u daawado videos. Kuwani video ciyaartoyda dadka badbaadin ka qabo in uu lacag qaali ah ciyaartoyda.
Download AVCHD Converter Free: